चिनी वा पाउडर चिनी Icing ThermoRecines
आधारभूत नुस्खा: चिनी चिनी
मिठाई1 मिनेट२ g० मानिस400२ क्यालोरी
धुलो चिनी, चिनी चिनी, चिनी चिनी र माथि चिनी गिलास। त्यहाँ धेरै सर्तहरू छन् जुन द्वारा यो ज्ञात छ धुलो चिनी पेस्ट्री र मिष्ठान्नका लागि आवश्यक। सत्य यो हो कि सबै सर्तहरू सही छन्, अन्तिमको बाहेक, यो अ from्ग्रेजीबाट आएको छैन (गिलास = क्रिस्टल), तर फ्रेन्चबाट (ग्ल्याक = हिउँ)। स्पेनिशमा सबै भन्दा व्यापक रूपमा स्वीकार्य भनेको चिनी चिनी हो, तर कोलम्बियामा यो छ धुलो चिनी; भेनेजुएलामा, यो छ नेभाजुकार; चिली मा यो छ चिनी फूल; र अर्जेन्टिना, बोलिभिया, इक्वेडर, पराग्वे, पेरू र उरुग्वे जस्ता धेरै अन्य देशहरूमा चीनी अप्रभावनीय। र यदि मैले एउटा नाम बिर्सें भने, कृपया मलाई माफ गर्नुहोस् र साझा गर्नुहोस्, हामी सधैं तपाईंको योगदानबाट धेरै सिक्छौं।
Icing चिनी धेरै व्यंजनहरु मा प्रयोग गरीन्छ: बिस्कुट, पेस्ट्री, कपकेकहरू... व्यावसायिक संस्करण पारंपरिक सेतो चिनी भन्दा अधिक महँगो हुन्छ। जे होस्, थर्मोमिक्सको साथ हामी खाली ठाउँ किन्छौं र हामीसँग १ मिनेट भन्दा कममा आईसिंग चिनी छ। केवल टर्बो प्रयोग गर्नुहोस्।
1 पाउडर चिनी - मूल विधि
पाउडर चिनी - मूल विधि
आईसिंग चिनी मिठाई र मिष्ठान्नका लागि एक पाउडर चिनी हो जुन विश्वमा धेरै नामहरू प्राप्त गर्दछ। आईसिंग चिनी, आईसिंग चिनी, आईसिंग चिनी, नेभा चिनी वा पाउडर चिनी ती हुन्।
सेवाहरू: 250 g
२ g० सेतो चिनी
गिलासमा चिनी राख्नुहोस्। ब्लेड र गिलास सफा र पूर्ण रूपमा सुक्खा हुनु पर्छ (यो आवश्यक छ)
ग्रिन्ड अप प्रगतिशील गति /40/१० मा /5० सेकेन्ड
यो आवश्यक छ कि गिलास र ब्लेडहरू सफा र सुक्खा छन्।
एक पटकमा 300 ग्राम भन्दा बढी गर्न यो सुविधाजनक छैन। यो समान रूपमा स्प्रे छैन।
यो कम्पोनेन्ट थपेर स्वाद लिन सकिन्छ: थोरै भनिला (कच्चा वा पाउडर, तरल होइन), अलिकता सिट्रसको बोक्रा (सधैं डिहाइड्रेटेड), दालचिनी।
यो चिनीको रूपमा भण्डार गर्न सकिन्छ, बन्द क्यानको भाँडोमा। यदि तपाईं यसलाई लामो समयको लागि वा उच्च आर्द्रता भएको ठाउँमा भण्डारण गर्दै हुनुहुन्छ भने, चिनीमा २० ग्राम कर्नोस्ट्रिक पिसाउनु अघि थप्नुहोस्। पीठोमा भएको स्टार्चले ओसलाई सोस्छ र यसलाई पकाउनबाट रोक्छ।
थप जानकारी - क्रिस्पी चकलेट कुकीज, रातो फल केक, चकलेट केक
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सजिलो, १ 15 मिनेट भन्दा कम, पेस्ट्री
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » सामान्य » सजिलो » आधारभूत नुस्खा: चिनी चिनी
मसँग एक नुस्खा छ जसमा यसले २० ग्राम कर्नस्टार्च २ 20० मिसाएर चिनीको २ 230० मिलाउन सल्लाह दिन्छ।
मैले यो केही समय अघि ब्लगबाट प्रतिलिपि गरें, तर मलाई वास्तवमै यो गर्नाले हुने फाइदाहरू थाहा छैन।
नमस्कार, मार्था। तपाईंले कर्नस्टार्च थप्नुभयो यदि तपाईं यसलाई लामो समयसम्म राख्नुहुन्छ भने कि पीठोमा भएको स्टार्चले ओसिलोमिश्रण गर्दछ। वास्तवमा, म यो नुस्खा नोट मा राख्न जाँदैछु। धन्यवाद र अंगालो!
धेरै धेरै आना धन्यवाद।
तपाईं हाम्रो दिनदिनो भान्साकोठामा कसरी सुविधा दिनुहुन्छ
धन्यवाद मार्टा! चुम्बन!
जोस लुइस मार्टिनेज कार्भाजल भन्यो
ज्ञान को लागी धन्यवाद
José Luis Martínez Carvajal लाई जवाफ दिनुहोस्
हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद !! 😀
मेक्सिकन चिली कोन carne burritos